Kudarrooyinka ugu Fiican ee Kirada Fasaxyada
Features » Ku-darka
Kordhi faa iidooyinkaaga macaashka adoo iibinaya badeecooyin iyo adeegyo dheeri ah adoo adeegsanaya add-ons-ka Zeevou.
Xadka faa'iidada u leh shirkadaha martigelinta ayaa mararka qaarkood noqon kara mid adag. Maaddaama ay tahay shirkad martigelin ah, had iyo jeer waa fikrad wanaagsan in lagu daro dakhliga soo gala si ay kaaga caawiso inaad kobciso ganacsigaaga. Sida ganacsiyada kale, martigelintu waxay leedahay xilliyo sare iyo kuwo hoose oo u gaar ah taas oo macnaheedu yahay inaan dhammaanteen u baahan nahay inaan sida ugu fiican ugu dadaalno sidii aan uga faa'iidaysan lahayn meelaha sare.
Mid ka mid ah hababka ugu fudud ee lagu hagaajin karo qadka hoose waa iyadoo kor loo qaado alaabada iyo adeegyada dheeraadka ah. Waxaan ka helnay, sannadihii aan soo aragnay, in wax-ku-kordhintu aysan adiga kaliya faaiido kuu lahayn laakiin martidu sidoo kale way qaddarinayaan adeegyada lagu daray iyo qiimaha. Waxaan ogaanay inay kor uqaadeyso qiimeynta wanaagsan. Marka la barbardhigo inta badan nidaamyada kale ee PMS, oo ama aan lahayn muuqaalkan, ama aan kuu oggolaanayn inaad ku iibiso xirmooyinka boggaaga, ma jiraan wax ka mid ah xayiraadahaas Zeevou, waxaan ka fikirnay wax kasta oo kaa caawinaya inaad abuurto faylal xoog leh .
Haddii aad nasiib u leedahay inaad horeba u isticmaashay xalka bixiya wax ku darista, waxay badanaa noqon kartaa mid caqabad ku ah la socoshada dakhliga ka soo gala kuwan, gaar ahaan inaad la socoto wixii kharash ah ee iyaga la xiriira. Markii aan qiimeyneyno xalalka kale, waxaan helnay wax aan macquul aheyn in laga shaqeeyo farqiga faa iidada ee soo noqnoqota, ka dibna lagu daro kuwan hadalada billaha ah ee P&L. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan aragnaa inta badan martigaliyayaasha inay ka quustaan ​​fikradda ah in lagu daro waxyaabo dheeri ah sababo la xiriira dhibaatooyin aan loo baahnayn iyo la'aanta dabagal dhaqaale oo habboon.
Sidee ayey Zeevou Kudarradu u caawin karaan?
Sifada cusub ee Zeevou, ku darista, waxay halkan u joogtaa inay kaa caawiso inaad guuleysato oo aad ku darto faa'iido badan martidaada, dhib la'aan. Zeevou waxay kuu ogolaaneysaa inaadan kaliya gawaarida iibin habeenada qolkaaga laakiin sidoo kale inaad ku iibiso waxyaabo dheeri ah martida ku ballansan adoo adeegsanaya toos u dalbashada degelka. Intaa waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa waxyaabo dheeri ah boos celinta oo aad ka hesho mid ka mid ah 200 + OTAs tan Zeevou Maareeyaha Channel dhexgalo. Hawshan ka socota Zeevou waxay ka dhigeysaa kuwa lagu daro inay helaan muuqaal badan waxayna ka caawisaa macaamiisha mustaqbalka inay arkaan inaad u socoto masaafada dheeriga ah si aad u bixiso adeeg weyn. Zeevou sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad otomaatigto bixinta illaa xiriiriyaheena 3-D ee aaminka ah.
3-D xiriiriyeyaal aamin ah ayaa loogu talagalay in lagu hubiyo in macaamillada khadka tooska ah ee kaararka bangiga ay gebi ahaanba ammaan yihiin oo ammaan yihiin. Markaa looma baahna in laga baqo khayaanada internetka maaddaama amniga tallaabo kasta oo geeddi-socodkan khadka tooska ah ay dammaanad ka qaadday Zeevou. Marka, waad nasan kartaa in dhammaan lacagaha la hubiyo oo aan walwal lahayn.
Kudarraduhu waxay la xiriiri karaan wixii cayiman guryaha, markaa muuqaalkani waa mid aad u habeyn kara baahiyahaaga iyo goob kasta oo gaar ah. Halkan Zeevou, waxaan sidoo kale, ku siineynaa fursado dhowr ah oo ku saabsan sida darbiyada loo xisaabiyo si loo buuxiyo shuruudahaaga. Ka sokow haysashada qiimaha iibka, ku dar kasta ayaa waliba lala xiriirin karaa qiimaha iibsiga. Tani waxay u oggolaaneysaa Zeevou inay ka shaqeyso farqiga faa iidada ee duulimaadka sidaa darteed waxaad ka arki kartaa soohdimaha iibinta mid kasta oo lagu daro. Hawl-wadeennada ayaa qeexi kara in saamiga faa'iidadaas ay tahay inuu tago Mulkiilaha hantida, iyo, haddii ay sidaas tahay, boqolkiiba intee. Wax walba gebi ahaanba gacantaada ayey ku jiraan si ay u doortaan tallaabada aad jeceshahay inaad qaaddo. Kudarayaasha sidoo kale waa loo dejin karaa ogolaanshaha martigeliyaha, oo kaliya ayaa la xajisan karaa wakhti go'an oo cayiman kahor taariikhda imaanshaha.
Kudarraduhu ma ahan uun muuqaal-muuqaal fudud oo ka jira Zeevou. Waxay sidoo kale awood kuu siineysaa inaad sheegto khidmadaha hore ee soo-galitaanka / ka-bixitaanka, iyo sidoo kale khidmadaha soo-daahidda ee goor dambe ee heerka sumadda, oo aad uga adkaato kuwan heerka hantida. Iyada oo qayb ka ah 5-Habka Xaqiijinta Buugga, waxaan soo aruurineynaa waqtiga lagu qiyaasay martida inuu yimaado. Lagu dhisay qaybtan nidaamka, waa kor u qaadista jeegagga hore iyo dambe. Martida waxaa lagu wargaliyaa wixii khidmad ah ee khuseeya ee laxiriira waqtiga xulashada waxayna awoodaan inay kubixiyaan qayb kamid ah talaabooyinka xiga. Nidaamkani wuxuu ka caawinayaa martida inay aaminaan nidaamkaaga.
Tilmaamaha lagu daro ee ay soo saartay Zeevou waxay bixisaa xalka dhamaadka-dhamaadka ee iibinta alaabada dheeraadka ah. Adoo adeegsanaya astaantan waxaad awood u yeelan kartaa inaad si buuxda u xakameyso dhammaan alaabadaada oo aad u maamusho faa'iidooyinkaaga add-on dhammaantood.
Muuqaalka 'Zeevou add ons' wuxuu si weyn kaaga caawin doonaa inaad xirato alaabtaada oo aad geedi socodka ka dhigto mid toos ah.
Codso muuqaalka Zeevou maanta, oo aan ku tusno muuqaalkeenna Add ons iyo dhammaan faa'iidooyinka kale ee Zeevou ku siin karto ganacsigaaga. Kooxdayadu waxay hubin doonaan in lagaa caawiyey tallaabo kasta oo aad qaaddo!
xiriirka Kooxda taageerada Zeevou maanta.